PSJTV | कोभिड–१९ नियन्त्रणबारे चीनले गरेको दाबी किन गलत ?
एजेन्सी : चीनले हाल कोभिड–१९ सम्बन्धी कुनै नयाँ घटनाहरु बाहिर ल्याउन चाहेको छैन । तर, बीबीसीका रोबिन ब्रान्टले लेखे जस्तै यी तथ्यांकहरूबारे भरोसा गर्न सकिदैनन् । चीनका अधिकारीहरुले हरेक दिन बिहान ३ बजे संसारलाई कोभिड–१९ को अकडालाई देखाउन एकै ठाउमा नियन्त्र गरी राख्दै आएको छ । चीनले ७ अप्रिल सम्म ८१ हजार ७ ४० संक्रमित र ३ हजार ३ सय ३१ को मृत्यु भएको घटना बाहिर ल्याएको छ ।
भाइरस फैलिरहेको देशले चीनलाई संकट समाधान गरेको देखेर प्रशंसा समेत गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहोम घेब्यियसले चीन तीव्र गतिमा भाइसलाई पतालगाई पारदर्शिता गरेको प्रति धन्यवादद समेत दियो । तर, डब्ल्यूएचओका ती न्यानो शब्दहरूको बाबजुद पनि, आधिकारिकहरु प्रस्तुत गरिरहेको तथ्यांक प्रति शंका रहेको छ ।
गत हप्ता ब्रिटिश सरकारका वरिष्ठ मन्त्री माइकल गोवेले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने कि चीनबाट प्रतुत भइरहेको तथ्यांक स्पष्ट छैन यो तथ्यांक माथि शंका गर्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गत हप्ता भनेका थिए कि चीनमा संक्रमन र मृत्युको सख्या केही कम देखिन्छ । केहि समयको लागि अमेरिकी सांसदहरूले चीनमा कोभिड –१९ प्रकोपको संख्यामा कमी भएको आरोप लगाए ।
विश्वमा कोरोनाको घटनाहरु बढदै गर्दा अमेरिकाले चिनियाँ मुद्दाहरू र मृत्युको घटनाहरूलाई टाढा लगिँदै गइरहेको छ । तर, चीन कोरोना संक्रमण र मृत्युको तथ्यांक सार्वजानिक गर्नु प्रति पूर्ण इमान्दार देखिएको छैन । यो अविश्वास आंशिक रूपमा इतिहाससँग जोड्दै जाने छ । आंशिक रूपमा स्पष्टताको अभाले जुन अविश्वासमा अविश्वास जन्म दिँदै आइरहेको छ ।
गोप्य तथ्यांकको इतिहासलाई चीनको प्रतिष्ठामा खराव असर पर्न सक्छ । उसलाई विश्वलाई विश्वास दिलाउन अधिकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुपर्थियो । चीन आफनो अर्थ व्यवस्थालाई प्रगतिमा ल्यानएर देश र सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको लागि साचो बनाउन चाहन्छ । धेरैजसो देशहरूको विपरीत, चीनको त्रैमासिक जीडीपी आंकडा लामो समयदेखि यसको वास्तविक आर्थिक प्रदर्शनको सटीक प्रतिबिम्बभन्दा एक गाइडको रूपमा बढी मानिन्छ ।
यो महामारीभन्दा पहिले, सरकारले २०२० मा करिब ६ प्रतिशत वृद्धिको लागि लक्ष्य बनाएको थियो । पहिलेदेखि पलानिङ्ग गरेर पूर्वानुमान गर्न भने त्यो लगभग सधैं हासिल हुन्छ नै । तर, चीन बाहिर केहि अर्थशास्त्रीहरु छन् जसले चीनको अर्थ व्यवस्थालाई अध्यनन गर्दै आइरहेको छ । उनीहरुले अनुसार कुनै तुलनात्मक अर्थव्यवस्थासँग संख्या छैन जुन यो संदिग्ध रूपमा लगातार स्तरमा वृद्धी हुन्छ ।
कहिलेकाँही कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्वानुमानमान निर्भर गर्दछ । यद्यपि उनीहरूलाई वास्तवमै भेटिएन भने पनि उल्टो, पार्टीको अभिप्राय पूरा नगरेको खण्डमा वास्तविकता लुकाउँछ । केही प्रान्तीय स्तरका अधिकारीहरुलाई नक्कली जीडीपी नम्बर फाइल गर्न सार्वजनिक सजाय दिएको थियो ।
यदि चीनले जीडीपी जस्तो महत्वपूर्ण चीजको बारे अस्पष्ट छ । भन्ने लगातार आरोपहरूको सामना गर्न सक्छ । तर, कोभिड– १९ को सन्दर्भमा इमान्दार देखिएनन् ।
तत्कालै नेपाली भूमिमा रेल ल्याउन नसकिने
काठमाडौं : भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालले ‘अरु कसैको इसारामा’ पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । नयाँदिल्लीस्थित सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाको थिंकट्याकं मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं ...